Kooxda Barcelona oo xaqiijisay dhaawaca Luis Suarez – Gool FM
Kooxda Barcelona oo xaqiijisay dhaawaca Luis Suarez
Haaruun November 3, 2019
(Barcelona) 03 Nof 2019. Barcelona ayaa xaqiijisay in Luis Suarez uu dhaawac ka soo gaaray lugtiisa midig intii lagu jiray kulankii dhacay shalay oo sabti ahayd xilli kooxdiisana ay la kulantay guuldarrado lama filaan ah oo 3-1 ah ee ka soo gaartay naadiga Levante.
Laacibka reer Uruguay ayaa lagu qasbanaaday in la badelo wax yar ka hor intaysan gaarin qeybta labaad ciyaartii ka soconaysay Estadio Ciudad de Valencia, halkaas oo kooxda haysata horyaalka Spain laga badiyay markii ugu horreysay tan iyo 21-kii September.
Qoraal lagu soo dhigay bogga rasmiga ah ee Barca ayaa lagu sheegay in Suarez uu dhaawac kubka ah soo gaaray, laakiin kooxda reer Catalan wali ma shaacin goorta laga yaabo inuu Weeraryahanku diyaar u noqdo in uu ku soo laabto xayndaabka cagaaran.
32-sano jirkan ayaa siddeed gool dhaliyay 12 kulan oo uu u saftay kooxda uu maamulo Macallin Ernesto Valverde xilli ciyaareedkan, inkastoo uu wakhti ku qaatay dhaawac kubka ah oo horay u soo gaaray, balse uu ka kabsaday ugu dambeyn.
Barca tallaabada u xigta khasaaradii shalay ka soo gaartay Levante waxa ay noqon doontaa inay garoonkooda kula ciyaarayaan Slavia Prague kulan ka tirsan koobka horyaallada Yurub ee UEFA Champions League habeenka Talaadada ka hor inta aysan ku soo dhaweyn Celta Vigo Camp Nou isbuuca soo socda.
Ousmane Dembele ayaa diyaar u ah xulashada kaddib ganaax uu ku maqnaa, laakiin ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka France ayaan xitaa ku jirin kooxdii guuldarrada Sabtidii ka soo gaartay Levante.
Si kastaba ha noqotee, kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa culeys badan ku dareemi doonta maqnaashiyaha weeraryahankooda halista badan, waxaana ay masuuliyadda ugu weyn ay dusha ka fuuli doontaa xiddigaha Lionel Messi, Antoine Griezmann iyo Dembele kuwaasoo ah xiddigaha weerarka ee u bed qaba Barcelona.
Kooxda PSG oo heshiis cusub ka saxiixanaysa mid ka mid ah daafacyadeeda